CJ Myanmar: June 2012
CJMyanmar ၏ တစ်ကွက်ကာတွန်း အစီအစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလော ဘေးဒုက္ခရောက်နေကြသည့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများကို လှူဒါန်းရန် အတွက် တရားပွဲ ကျင်းပ
(Friday, June 29, 2012) မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၄၅ လမ်းထောင့် ရှိ သာသနာ ၂၅၀၀ - ဓမ္မာရုံ၌ ဇွန်လ(၂၇)ရက်နေ့ ည(၈နာရီခွဲ) က ''ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလော ဘေးဒုက္ခရောက်နေကြသည့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများကို လှူဒါန်းရန် အတွက် တရားပွဲ ကျင်းပလှူဒါန်းကြရာ ''အရှင်ဝီရသူ'' မှ ''တွေးစမနေ နဲ့ ဖေးမလေကွဲ့'' တရားတော်ကို ဟောကြားခဲ့သည်။ တရားပွဲသို့ တရားနာ အလှူရှင် ပရိတ်သတ် ၆၅၀ ခန့် တက်ရောက် တရားနာခဲ့ကြပြီး အလှူငွေ သိန်း ၂၀ ခန့်ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြကြောင်း CJMyanmar မှ သတင်းရရှိသည်။
သတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံ : တမာပင်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘေးဒုက္ခရောက် ပြည်သူများအတွက်
(Friday, June 29, 2012) အလှူပစ္စည်းများ
Real Friends Dancers အဖွဲ့
အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသူများ၊ အလှူရှင်များ၊
MTG ( Mobile Trading Group) ၏ MD ကိုမင်းသန့်
စာရေးဆရာ ညီစေမင်း၏ မုဒိတာ စကား
လူငယ်မျက်လှည့်ပညာရှင် Mr. Zero နှင့် ပါဝင်ကူညီ ပြသသူများ
အဖြုရောင်တွဲလက်များအဖွဲ့မှ ကိုဘိုဘိုက ကချင်ဒေသမှ ဒုက္ခသည်များအား လှူဒါန်းနေမှုများကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ပြ
Peace Weapon Band အဖွဲ့
MTG ( Mobile Trading Group) မှ မတည်အလှူငွေကျပ် ၁၅ သိန်း
မန္တလေး orange Supermarket များရှိ ဆိုင်အလှူခံပုံးများအတွင်းမှ ရရှိ စုစုပေါင်း အလှူငွေကျပ် ၁၂ သိန်းနှင့် အဝတ်အထည် အစုံ ၇၀၀ ခန့်၊
ဦးစန်းအောင်ခေါ်မောင်မြတ်မှိုင်း နှင့် ပန်တျာဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် (လမင်းတစ်ရာမိသားစု) မှ အလှူငွေကျပ် ၅၀၀၀၀၊
Greatwall Shopping Center ရှိ MTG ( Mobile Trading Group) ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် Greatwall Shopping Center မှဆိုင်ခန်းရှင်များ၊ အလှုရှင် မိဘပြည်သူများက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘေးဒုက္ခရောက်
ပြည်သူများအတွက် အလှုငွေနှင့် အလှူပစ္စည်းများ လွဲပြောင်းပေးအပ် လှုဒါန်းပွဲ
သတင်း နှင့် ဓါတ်ပုံ CJM 024
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘေးဒုက္ခရောက် ပြည်သူများအတွက် Greatwall Shopping Center မှဆိုင်ခန်းရှင်များ၊ အလှုရှင် မိဘပြည်သူများရဲ့ အလှူပွဲ
(Friday, June 29, 2012) မန္တလေး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ၇၈ လမ်း၊ ၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား၊ Greatwall Shopping Center ရှိ MTG ( Mobile Trading Group) ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် Greatwall Shopping Center မှဆိုင်ခန်းရှင်များ၊ အလှုရှင် မိဘပြည်သူများက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘေးဒုက္ခရောက် ပြည်သူများအတွက် အလှုငွေနှင့် ပစ္စည်းများကို စိမ်းရောင်စို Activities သိုလွဲပြောင်းပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲကို ယနေ့နံက် ၁၀ နာရီက Greatwall Shopping Center တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
အခမ်းအနားသို့ အလှူရှင်များ၊ စိမ်းရောင်စို Activities မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များနှင့် စာနယ်ဇင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ စုံညီစွာ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် MTG ( Mobile Trading Group) ၏ MD ကိုမင်းသန့်မှ ပရဟိတအလှူငွေ ဦးဆောင်လှူဒါန်းရခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြကာ စာရေးဆရာညီစေမင်းမှ မုဒိတာစကား ပြောကြားသည်။ ထိုနောက် အဖြုရောင်တွဲလက်များအဖွဲ့မှ ကိုဘိုဘိုမှ ကချင်ဒေသမှ ဒုက္ခသည်များအား လှူဒါန်းနေမှုများကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ပြကာ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသူများအား Real Friends Dancers အဖွဲ့၊ လူငယ်မျက်လှည့်ပညာရှင် Mr. Zero နှင့် Peace Weapon Band အဖွဲ့များက အက၊ မျက်လှည့်၊ တေးဂီတများဖြင့် ဖြေဖျော်တင်ဆက်ကြသည်။
MTG ( Mobile Trading Group) ၏ MD ကိုမင်းသန့် စာရေးဆရာညီစေမင်း အဖြုရောင်တွဲလက်များအဖွဲ့မှ ကိုဘိုဘို
Peace Weapon Band အဖွဲ့ ထိုနောက် လှူဒါန်းပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ MTG ( Mobile Trading Group) မှ မတည်အလှူငွေကျပ် ၁၅ သိန်း၊ မန္တလေး orange Supermarket များရှိ ဆိုင်အလှူခံပုံးများအတွင်းမှ ရရှိ စုစုပေါင်း အလှူငွေကျပ် ၁၂ သိန်းနှင့် အဝတ်အထည် အစုံ ၇၀၀ ခန့်၊ Greatwall Shopping Center မှ ဆိုင်ခန်းရှင်များ စုပေါင်းလှူဒါန်းငွေ ၆၈၃၂၀၀ ကျပ်၊ စိန်ဝင်းဝင်း ကဖေးမှ အလှူခံရရှိငွေ ၅၅၀၀၀
ကျပ်၊ အောင်ထွန်းထွန်း ကဖေးမှ အလှူခံ ရရှိငွေ ၂၀၁၅၀၀ ကျပ်၊ ဒါနသီလ ဘုံဆွမ်းလောင်းအသင်း အခမဲ့ သွေးလှူရှင်များအဖွဲ့မှ အလှူငွေ ၇၅၀၀၀ ကျပ်၊ ဦးစန်းအောင်ခေါ်မောင်မြတ်မှိုင်း နှင့် ပန်တျာဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် (လမင်းတစ်ရာမိသားစု) မှ အလှူငွေကျပ် ၅၀၀၀၀၊ ကိုသားငယ် မနွေးနွေး (ရေဦးပွဲရုံ) မှ အလှူငွေကျပ် ၃၀၀၀၀၊ ဦးကျော်ဝင်း ဒေါ်အေးသီ (ရွှေပျား ဓာတ်မြေသြဇာ ရောင်းဝယ်ရေး) မှ ဆန် ၁၀ အိတ်နှင့် အလှူရှင် တစ်ဦးမှ မှ မုန့်သေတ္တာ ၅ လုံး အပါအဝင် ငွေကြေး၊ အစားအသောက်၊ အထွေထွေပစ္စည်းများ ပါဝင် လှူဒါန်းကြရာ စိမ်းရောင်စို Activities မှ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကာ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း CJMyanmar မှသတင်းရရှိသည်။
MTG ( Mobile Trading Group) မှ မတည်အလှူငွေကျပ် ၁၅ သိန်း၊
ရေကြီးမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနားတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၀၀)ခန့်အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရ
"ရေကြီးမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနားတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၀၀)ခန့်အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရ"
(28.6.2012), By CJMyanmar
၆၊ ၂၀၁၂)ရက်က ရေကြီးမှုကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ရပ်ကွက်အချို့တွင် ရေကြီးရေ၀င်ခဲ့ရာ နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းအရ ရေ၀င်ခဲ့သော ရပ်ကွက်များမှ အတိဒုက္ခရောက်နေသူ အိမ်ထောင်စု (၈၀၀)ခန့်၊ လူဦးရေ လေးထောင်ကျော်အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရကြောင်း CJMyanmar က သတင်းရရှိသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများကို အခြေခံပညာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း အနည်းဆုံး (၉)ခု ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ပြေးရှောင်ရသူများအတွက် ပြီးခဲ့သော တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ရရာ ယခု ရေဘေးကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်းအသစ်များ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ထပ်မံတိုးလာရပြန်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်း ပြီးခဲ့သောလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းများကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ရသည်။
(CJMyanmar ၏ CJ တစ်ဦး ပေးပို့သည်)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ မင်းဂံရပ်ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များနေထိုင်ရာ ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်ပိုင်းတွင် တွေ့မြင်ရစဉ်
(Wednesday, June 27, 2012 )
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ မင်းဂံရပ်ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များနေထိုင်ရာ ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်ပိုင်းတွင် တွေ့မြင်ရစဉ် (CJMyanmar ၏ Citizen Journalist တစ်ဦး ပေးပို့သည်)
" မြန်မာအသင်းခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ ကွင်းထဲအရောက် အားပေးစို့ "
" မြန်မာအသင်းခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ ကွင်းထဲအရောက် အားပေးစို့ " ဆိုင်းဘုတ်အား ရန်ကုန်မြို့တစ်နေရာတွင် စိုက်ထူထားသည်ကို (၂၆-၆-၂၀၁၂)နေ့က တွေ့မြင်ရစဉ် By CJM 030 AFC U-22 CHAMPIONSHIP 2013 QUALIFIERS Group (G) - မြန်မာ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်ဝမ် ၂၃-၆-၂၀၁၂ မြန်မာ ၅ ဂိုး - ဖိလစ်ပိုင် ၁ ဂိုး ၂၅-၆-၂၀၁၂ မြန်မာ ၃ ဂိုး - ဗီယက်နမ် ၁ ဂိုး ၂၈-၆-၂၀၁၂ (ညနေ ၆း၁၅ နာရီ၊ သုဝဏ္ဏ္ဏကွင်း) မြန်မာ ? ဂိုး - တောင်ကိုရီးယား ? ဂိုး ၃၀-၆-၂၀၁၂ (ညနေ ၃း၁၅ နာရီ၊ သုဝဏ္ဏ္ဏကွင်း) မြန်မာ ? ဂိုး - ထိုင်ဝမ် ? ဂိုး ၃-၇-၂၀၁၂ (ညနေ ၆း၁၅ နာရီ၊ သုဝဏ္ဏ္ဏကွင်း) မြန်မာ ? ဂိုး - မလေးရှား ? ဂိုး
ရန်ကုန်မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင် ၃၃၁/၆တွင် မိတ္ထိလာမှ မန္တလေးသို့မောင်းနှင်လာသော လမ်းအလုပ်သမားများတင်ဆောင်လာသည့် ဟိုင်းလက်အမျိုးအစားကားတစ်စီး တိမ်းမှောက်
ဇွန်လ (၂၇)ရက်၊ ညနေ (၅)နာရီဝန်းကျင်တွင် ရန်ကုန်မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင် ၃၃၁/
မိတ္ထိလာမှ မန္တလေးသို့မောင်းနှင်လာသော လမ်းအလုပ်သမားများတင်ဆောင်လာသည့် ဟိုင်းလက်အမျိုးအစားကားတစ်စီး တိမ်းမှောက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါကားပေါ်တွင် အလုပ်သမား ၂၂ဦးပါရှိပြီး အားလုံးကို တံတားဦးဆေးရုံတွင် တင်ထားကြောင်း၊ (၁)ဦးမှာ တံတားဦးဆေးရုံတွင် သေဆုံးသွားကြောင်း၊ လိုအပ်ပါက
မန္တလေးဆေးရုံကြီးသို့ ဆက်လက် ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဆေးရုံတွင်ရောက်ရှိနေသော လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ CJ Myanmar ကိုပြောကြားသည်။
"ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်း မိုးကြောင့် ရေလျှံ"
မိုးများသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့အချို့တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နည်းတူ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ယမန်နေ့ (၂၆၊ ၆၊ ၂၀၁၂) ညနေပိုင်းက စတင် ရွာသွန်းခဲ့သည့် သည်းထန်မိုးကြောင့် ယနေ့ (၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၂)တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့၏ ရပ်ကွက်အချို့တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း CJMyanmar ၏ CJ သတင်းထောက်တစ်ဦးက သတင်းပေးပို့ပါသည်။
အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးဒေသ ဥသျှစ်ကုန်းရွာမှ ရေတင်မရသေးတဲ့ စည်ပင် စက်ရေတွင်း
(Monday, June 25, 2012 )
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးဒေသ ဥသျှစ်ကုန်းရွာတွင်
သောက်သုံးရေရှားပါးလျှက် ရှိနေသဖြင့် ကျေးရွာနေ ပြည်သူများ ရေရှားပါးမှု ဒုက္ခကြုံတွေ နေကြရကြောင်း သိရသည်။
ဥသျှစ်ကုန်းရွာသည် အင်းတော်မြို့နယ်နှင့် မိုင် ၂၀ ခန့် ဝေးကွာပြီး လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့် ဒေသဖြစ်ကာ သောက်သုံးရေ အတွက် ရေတွင်း၊ တုံကင်တွင်းများလည်း တူးဖော်မရနိုင်သောကြောင့် ရွာအနီးမှ ချောင်းငယ်တစ်ခုကို အားကိုးနေရကာ ထိုချောင်းငယ်မှာလည်း နွေရာသီတွင် ရေအလွန်နည်းသဖြင့် ချောင်းကောမှ မသန့်ရှင်းသည့်ရေကို ကျေးရွာလူထုမှ အားထား သုံးစွဲနေကြရသည်။
ထိုအခြေအနေကြောင့် နိုင်ငံတော်မှ စက်ရေတွင်းတူဖော်ရန်အတွက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ချမှတ်ပေးခဲ့ရာ စက်ရေတွင်းကို အင်းတော်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ၃.၁၂.၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁.၁.၂၀၀၄တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်ဟုသိရပြီး ထိုစက်ရေတွင်းကို (၂"x၂")တွင်း၊ ရေထွက်နှုန်း တစ်နာရီ ဂါလံကိုးရာဟု ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ရေကို စုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက် အင်ဂျင်ကိုမူ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထု ယနေ့တိုင် သုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ အချိန်တွင် ကျေးရွာမှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ထားသည့် ထိုစက်ရေတွင်းလေးကို ကျေးရွာပြည်သူများ အသုံးပြုနိုင်စေရန် လိုအပ်လျှက်ရှိသည့် ရေတင်အင်ဂျင်မော်တာ စက်တစ်လုံးကို နိုင်ငံတော်မှ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါရန် မျှော်လင့်လျှက်ရှိကြောင်း CJMyanmar မှ သတင်းရရှိသည်။
သတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံ : မာန်ဟုန်ငယ် (မော်လူး)
ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက် ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်ဌာနများမှ သတင်းထောက်အချို့
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် ကြွချီလာသော ဆရာတော်ဘုရားများ
ကူညီကယ်ဆယ်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီခွဲအချိန်တွင် Air Mandalay လေကြောင်းဖြင့် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီး (ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သွားရောက်သတင်းရယူနေသော CJMyanmar ၏ CJ တစ်ဦးက သတင်းပေးပို့သည်) Venerable A Lo Taw Pyae Sayardaw has arrived to Sittwe on June 25, 2012, at 9:30am with Air Mandalay Flight to help the victims in Rakhine State. (A CJ from CJ Myanmar in Rakhine reported this news)
ကူညီကယ်ဆယ်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီအချိန်တွင် မြန်မာ့လေကြောင်းဖြင့် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ မကြီးကျွန်းရွာဇာတိ တိပိဋကဓရဘွဲ့ရဆရာတော် ဦးအိန္ဒပါလ (ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သွားရောက်သတင်းရယူနေသော CJMyanmar ၏ CJ တစ်ဦးက သတင်းပေးပို့သည်)
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလော ဘေးဒုက္ခရောက်နေကြသည့် တို...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘေးဒုက္ခရောက် ပြည်သူများအတွက် Great...
ရေကြီးမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနားတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၀၀)ခ...
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ မင်းဂံရပ်ကွက်တွင် ဖွင်...
" မြန်မာအသင်းခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ ကွင်းထဲအရောက် အားေ...
ရန်ကုန်မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင် ၃၃၁/၆တွင် ...
အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးဒေသ ဥသျှစ်ကုန်းရွာမှ ရေတင်...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက် ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်ဌာနများမှ သ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် ကြွချီလာသော ဆ...
စစ်တွေမြို့သို့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ...
5 Journalists for Peace ဓာတ်ပုံပြပွဲ ဖွင့်ပွဲတွင် ...
ရသာကောင်း ချိုချဉ် နှင့် ပီကေလုပ်ငန်း အလုပ်သမားမျာ...
ရခိုင်ပြည်နောက်ဆုံးရ သတင်းများ (၂၃ရက် စနေ ၂၀၁၂)
မန္တလေးမြို့ အခွန်အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ
ရသာကောင်း ချိုချဉ်နှင့် ပီကေလုပ်ငန်း အလုပ်သမားများ...
ဗကသ(အထက်မြန်မာပြည်)ရဲ့ မြေနီကုန်း ၂၄ နှစ်မြောက်ပွဲ...
စစ်တွေနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများ...
ကာတွန်းအောင်မော်၏ လက်ရာ CJMyanmar တကွက် ကာတွန်း အစ...
One Candle စေတနာရှင် လူငယ်များ အဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ထားသော အွန်လိုင်...
ဓာတ်ခဲစက်ရုံ အလုပ်သမားများ အချက် ၉ ချက်တောင်းဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၆၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှ...
CJMyanmar ၏ တစ်ကွက် ကာတွန်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ဝါသနာရှင် ဓာ...
သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်း သို့ ၀မ်း...
သတင်းစာ ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်း ကွယ်လွန်
CJMyanmar.com မှ သတင်းများကို i Phone များနှင့် An...
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၊ ဝင်္ကပါကွင်းအနီးရှိ ကျားရ...
ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) များ စက်လှေများဖြင့် စစ်တွေမြို...
CJMyanmar Page ၇၀၀၀ပြည့်
မန္တလေးမြို့ပေါ်၌ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းများ အချိန်ပိ...
News Watch သတင်းဂျာနယ်သို့ CJMyanmar မှ အသိပေးခြင်...
စစ်တွေမြို့ အနီးတွင် တည်ရှိသော သဲချောင်းရွာ ကျောင်...
ဇွန်လ (၁၅)ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် သတင်းများ။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ လတ်တလော ဖွင့်လှစ်ထားသော ကယ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခအတွင်း မ...
စစ်တွေမြို့ ကမ်းစပ်နှင့် နေအိမ်များသို့ ညပိုင်းတွင...
တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူအမျိုးအစားသစ်ကို ဇွန်လ ၁၅ရ...
ဇွန်လ (၁၅)ရက်နေ့ နံနက် (၁)နာရီဝန်းကျင်အချိန်တွင် စ...
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းနု...
"အခမဲ့သင် ပညာရေးစနစ် ရဲ့ အောက်ခြေမှာ ဖြစ်နေတာတွေ"
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် ၀မ်းရောဂ...
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ အစိုးရရုံးတွင် ဇွန်လ ...
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ အစိုးရရုံးတွင် မီဒီယာမျ...
အမှတ် ၄၁ အဆန် မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား ရထား မိုင်းထိ
ဗီဂျေးနမ်ဘီးယားရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဖျက်သိမ်း
ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိန်သံရုံးရှေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွ...
ဇွန်လ (၁၄)ရက်နေ့ စစ်တွေသတင်းများ။
ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချိုးဖောက်၍ လုံခြုံရေးထိပါးရန်ကြိ...
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ...
စစ်တွေမြို့ မိုးများရွာသွန်းမှုကြောင့် အခြေအနေများ
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ၊ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဥ...
www.cjmyanmar.com မှ သတင်းများကို Android Mobile P...
ယနေ့မနက် ၁၀း၄၅ နာရီ ဝန်းကျင်အချိန်တွင် တွေ့ရသော စစ...
ဇွန်လ (၁၃)ရက်နေ့ စစ်တွေသတင်းများ။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်မှ မြန်မာနိုင...
ဇွန်လ (၁၂)ရက်နေ့ စစ်တွေသတင်းများ။
ဇွန်လ (၁၂)ရက်နေ့ စစ်တွေ၊ နာဇီဈေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အိ...
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ စစ်တွေ သတင်းများ
CJ Myanmar ကို ယခုလိုအားပေခဲ့ကြတဲ့ပရိတ်သတ်များကို ...
Crisis in Rakhine State, Myanmar
ကာတွန်းအောင်မော်ရဲ့ လက်ရာ CJ Myanmar CARTOON
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ရိုဟင်ဂျာများ၏ အကြ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ အရေးပေါ် အခြေအနေ ထုတ်ပြန်။
"ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့် ပတ...
စစ်တွေမြို့တွင်း၌ ဘင်္ဂါလီနှင့် ရခိုင်များအကြား အပြ...
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ ရခိုင် လူမျိုး ထေ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဥရောပခရီးစဉ် သတ...
အမျိုးသားဒီိမိုကရေစီ အဖွဲချုပ်နှင့် မဟာမိတ်တိုင်းရ...
Heart to Heart - Praying for Kachin war victims
5 Journalists for Peace Photo Exhibition
CJ Myanmar ၏ သဘောထားရပ်တည်ချက်။
Rakhine Buddhist monks and people gather and pray
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အင်တာနက်လိပ်စာတွင် ဖော်ပြထားခ...
ကချင်ဒေသ စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူများအားလှူဒါန်း ထောက်ပံ့...
ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခမ်းမရှေ့တွင် ရခိုင်တိုင်းရင...
မန္တလေး၊ စိန်ဝင်းဝင်းကဖေးတွင် ဂီတမိတ် (မန္တလေး) သီဆိ...
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့၌ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများြ...
http://www.president-office.gov.mm/ တွင် ဖော်ပြထား...
၀န်ထမ်းလစာပါ၊ အချက်(၆)ချက် တောင်းဆိုမှုကို ပိုင်ရှင...
တစ်သောင်းတန်ပတ်တိုက် ( ဆူးငှက် )
“ပညာရေးလောကမှာတော့ အထက်က ဘယ်လိုပြောပြော အောက်မှာတေ...
အောင်စိန်ချည်မျှင် နှင့် ဆေးဆိုးစက်ရုံတွင် အလုပ်သမ...
မြန်မာငွေစက္ကူ ၁၀၀၀၀ ( ကျပ်တစ်သောင်း)တန် ထွက်ရှိ